बालबालिकाले असल सङ्गत कसरी थाहा पाउने ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more बालबालिकाले असल सङ्गत कसरी थाहा पाउने ?
मंसिर १८ गते, २०७७ - १०:५२
कैलाली । जीवनमा धेरै मानिससँग भेटघाट र नजिक भइन्छ । भेटे जतिका सबै मानिस, साथीभाइ र आफन्त विश्वासिला हुँदैनन् । साथीभाइ धेरै हुन्छन् तर जसले आफ्ना भित्री मनका कुरा बुझ्न सक्छ र दुःखसुखमा साथ दिन्छ उही नै असल साथी हुने टीकापुरका विष्णु पाण्डे बताउँछन् । “साथीहरु धेरै हुन्छन्, हामीलाई कुन असल छ भन्ने थाहा हुँदैन”, पाण्डे भन्छन्, “जसले राम्रो कुरा सिकाउँछ, अगाडि बढ्न प्रेरणा दिन्छ त्यस्तो साथीसँग मात्र सङ्गत गर्नुपर्छ ।”
किशोरकिशोरी गलत सङ्गतजस्ता कारणले गलत बाटोमा लाग्ने जोखिम हुन्छ । उनीहरुलाई गलत कार्यमा लाग्नबाट जोगाउन सबभन्दा बढी सचेत अभिभावक हुनुपर्छ । इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसुदन न्यौपाने लागुऔषध सेवन, बलात्कार, चोरीजस्ता अपराधमा समेत बालबालिकाको प्रयोग बढेको बताँछन् । “बालबालिका गलत होस् या सही दुवै काम जिज्ञासु भएर गर्छन्, उनीहरुलाई सही गलतको पहिचान हुँदैन”, न्यौपाने भन्छन्, “यस्तो बेला उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानसमेत थाहा हुँदैन । अभिभावक सचेत हुने हो अनि विद्यालयले पनि बालबालिकाको हरेक आनीबानीको निगरानी गर्नुपर्छ । उनीहरुका लागि घरमा पनि बालमैत्री वातावरण भएमा व्यस्त राख्न सकिन्छ ।”
बालबालिकामा विभिन्न थरिका भावना गुम्सिएर रहेका हुन्छन् । ती भावना सही समयमा सही व्यक्तिसँग पोख्न पाइएन वा सही सञ्चार हुन सकिएन भने उनीहरुमा विकराल अवस्था सिर्जना हुन सक्ने समाजशास्त्री शिवचरण चौधरी बताउँछन् । “मनमै कुरा खेलाउने वा गुम्साएर राख्ने बालबालिका नकारात्मक बाटोमा हिँड्न सक्छन्”, समाजशास्त्री चौधरी भन्छन्, “बालबालिका गलत बाटोमा लागे घर, समाज र देशको विकासमा बाधा पुग्छ । घर संसार सुन्दर बनाउन सन्तान असल हुनुपर्छ, त्यसैले बालबालिकालाई सही सूचना दिने, सही मार्ग देखाउने जिम्मा सबैको हो ।”
मंसिर १८ गते, २०७७ - १०:५२ मा प्रकाशित